Otu esi etinye Redis na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
Otu esi etinye Redis na Ubuntu 20.04
October 14, 2021 September 22, 2021 by Jọshụa James
Otu esi ahazi Redis
Hazie Max Ebe nchekwa
Hazie nnweta netwọkụ
Hazie Iwu UFW
Redis bụ isi mmalite mepere emepe (BSD nwere ikike), ụlọ ahịa nhazi data uru igodo nchekwa -ABỤ dị ka nchekwa data, cache, na onye na-ere ahịa ozi. Redis na-akwado usoro data dị ka eriri, hashes, ndepụta, setịpụ, nhazi ahazi nwere ajụjụ dị iche iche, bitmaps, log log, geospatial indexes, na iyi. Redis na-enyekwa nnukwu nnweta na mgbagha sọftụwia Redis Sentinel, na-eke nkewa akpaka n'ofe Redis nodes na Redis Cluster.
Na njedebe nke ntuziaka, ị ga-ama otu esi etinye ma hazie Redis na Ubuntu 20.04 gị sistemụ nrụọrụ.
Site na ndabara, usoro Redis 5 na-abịa gụnyere na ebe nchekwa Ubuntu 20.04. Iji wụnye ọrụ Redis, pịnye iwu a:
Nyochaa na arụnyere Redis nke ọma site n'ịkwado na iji iwu apt-cache:
Na-esote, nyochaa ọkwa ma hụ na Redis na-agba ọsọ na, nke ka mkpa, na-enweghị njehie:
Mara, Reddis na-ege ntị nke ọma na localhost na ndabara ọdụ ụgbọ mmiri 6379. Iji kwado ụdị a, ihe ndị a:
Ugbu a, ka ị na-anwale ihe niile na-arụ ọrụ ma na-arụ ọrụ, ọ dị mma ijikọ na ọrụ Redis gị wee mee ule ping.
Iji mee ule ahụ, tinye iwu a:
Ozugbo ejikọrọ, ọnụ ọnụ gị ga-egosipụta 127.0.0.1: 6379). Ugbu a ping ọrụ Redis dị ka ndị a:
Pịnye ihe a ka ịpụ na ihe atụ Redis:
Ekele, ị tinyela Redis na sistemụ arụmọrụ Ubuntu gị wee chọpụta na ọ na-arụ ọrụ. Na-esote, ị nwere ike hazie Redis.
Enwere ike ịhazi Redis n'ụzọ ole na ole. Omume kacha ama ama nke ihe kpatara ndị mmadụ ji eji Redis bụ maka ebumnuche caching. Iji mee nke a, ịkwesịrị imeghe "/etc/redis/redis.conf" faịlụ site na iji nano editọ.
Ugbu a, tinye ihe ndị a na njedebe nke faịlụ ahụ. Rịba ama na ị nwere ike ịgbanwe uru ebe nchekwa gaa na ihe ọ bụla masịrị gị ma ọ bụ, nke ka mkpa, kacha mma maka ngwa weebụ gị na ngwaike nkesa.
Dịka ị na-ahụ, ntọala dị na ntuziaka ahụ nwere 500MB raara nye Redis dịka ọ dị na onye ọbịa raara onwe ya nye nwere ọtụtụ RAM iji chekwaa. Ozugbo 500MB gwụchara, Redis na-ewepụ igodo ọ bụla dịka LRU algorithm.
Nhọrọ ọzọ bụ ige ntị ọrụ niile ma ọ bụ tọọ adreesị IP/subnet ma ọ bụrụ na-amasị gị ọrụ Redis.
Mbụ, chọta ahịrị 69 na faịlụ nhazi.
Nke mbụ, ka ige ntị na ntanetị netwọkụ niile, kwuo okwu "#" eriri na-ejikọta na IP:
Mara, gbaa mbọ hụ na netwọkụ nke ime gị bụ ntụkwasị obi yana njikwa nchekwa dabara adaba.
Iji jikọọ na adreesị IP, jide n'aka na ọ bụ adreesị IP kwụ ọtọ.
Iji kee subnet netwọk.
Mara, a na-atụ aro ka ịtọọ paswọọdụ mgbe ị na-eji subnet ma ọ bụ ịnweta oghere niile iji gee ntị.
Akụkụ nchekwa ọzọ yana ime ka Redis sie ike bụ ịtọ paswọọdụ na ihe atụ Redis.
Gaa na ahịrị 507, wee kwupụta ya "# ngafe chọrọ" ahịrị, ma tọọ paswọọdụ.
Gbaa mbọ hụ na okwuntughe a siri ike, ọnụọgụ, mkpụrụedemede, akara pụrụ iche, na isi obodo enweghị usoro dịka enwere ike mebie sava Redis na igbe dị mma nke ọma.
Na-esote, mgbe ị na-akpọ Redis-CLI, jiri iwu na-esote ya na paswọọdụ edobere maka onye ọrụ.
"THEPASSWORDSET" bụ paswọọdụ emepụtara.
Mgbe onye ọrụ agaghị abanye, ha ga-ahụ ozi njehie na-esonụ.
Mgbe onye ọrụ batara nke ọma, ha ga-ahụ ozi ndị a.
Ozugbo emechara, chekwaa mgbanwe gị CTRL + O wee pụọ CTRL + X. Ugbu a malitegharịa ọrụ Redis site na ịpị:
Ọ bụrụ na ị na-eji UFW firewall arụnyere na ndabara na nkesa Ubuntu, ị ga-achọ ịmepụta iwu ikike na ọdụ ụgbọ mmiri TCP 6379. Dabere na ntinye gị na ihe ndị a chọrọ ma ọ bụrụ na ị na-eji otu ma ọ bụ na netwọk ụyọkọ, ụfọdụ ihe atụ dị n'okpuru:
Ihe atụ ihe nkesa IP netwọk agbakwunyere:
Netwọk ụyọkọ nwere ọtụtụ ihe atụ:
Mara, iwu UFW nke abụọ bụ iwu subnet. Mara, gbaa mbọ hụ na netwọkụ dị n'ime nwere nchekwa yana ntụkwasị obi tupu ikwe ya.
Ugbu a, ka ị nwalere na mmalite nke ntuziaka ahụ site na ịpịnye ọrụ Redis gị iji jide n'aka na ọ na-arụ ọrụ, ị nwere ike ịnwale iwu firewall na mgbanwe na IP site na iji "redis-cli" iwu:
Ọ bụrụ na edobere ya nke ọma, nsonaazụ kwesịrị ịbụ:
N'ime ntuziaka ahụ, ị ​​mụtala ka esi etinye Redis na Ubuntu 20.04 Focal Fossa site na iji ebe nchekwa ndabere ya site na njikwa ngwugwu dabara adaba. Ị mụtala otu esi anwale ọrụ ahụ site na ịpị ya na ịgbanwe oke ebe nchekwa yana interface netwọk iji dabara na nhazi dị iche iche.
Ka ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara otu esi ejikwa nrụnye Redis gị, gaa na ya Akwụkwọ redis page.
Categories Ubuntu Tags Redis, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa Mail igodo
Otu esi etinye Plex Media Server na Debian 11 Bullseye
Otu esi etinye Memcached na Ubuntu 20.04